Home FARSAMADA FOOTBALL Gianni Infantino Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha aan la Ogeyn
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee Kubadda Cagta ee ugu Fiican Nederland "Gacan". Our Gianni Infantino Childhood Story Sheeko xariifnimo ah Xaqiiqooyinka Khudbadaha ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo oo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqayntu waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor inta caan ka ah, asalka qoyska, nolosha xidhiidhka, iyo xaqiiqooyin kale (wax yar oo la yaqaan) oo ku saabsan isaga.
Haa, qof waliba wuu ogyahay doorkiisa madaxtinimo ee FIFA. Si kastaba ha noqotee, kaliya qaar ka mid ah tixgelinta Gianni Infantino's Bio kaas oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan ado kale, aan bilaabi.
Gianni Infantino Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Xaqiiq ah -Nolosha Hore
Magaca buuxa waa Giovanni Vincenzo Infantino. Waxa kale oo loo yaqaanaa sida "Gianni". Infantino waxay ku dhalatay Maalinta 23rd March ee 1970 ee degmada Brig oo ku taala gobolka California ee Valais. Waxa uu ku dhashay aabihiis, Vincenzo Infantino (ganacsade Talyaani ah) iyo hooyadiis, Maria Minolfi (oo ah qof ka shaqeeya Talyaaniga).
Infantino waxay ka timaaddaa asalkoodii soo-galootiga. Waxa uu ku dhashay waddanka Talyaaniga ee u yimid Swiserland, halkaas oo uu ka yimid Aabaha ayaa bilaabay safarkiisa socdaalka iyo Lombardy, halkaas oo uu Hooyo waxay bilowday safarkeeda socdaalka. Carruurta yar yar ee dhallinyaradu ee dhallinyaradu waxay ku fashilmeen dhaqaale la'aan, inkastoo dadaal ay sameeyeen Vincenzo Infantino si ay u abuuraan ganacsi adag oo degaankooda cusub.
Gianni Infantino Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Xaqiiq ah -Jacaylka Waxbarashada
Inkasta oo dhibaatooyin dhaqaale oo qoyskiisa ay soo gaareen, waalidiinta Gianni Infantino ayaa awooday inay kafaala-qaataan waxbarashada asaasiga ah iyo dugsiga sare. Intii lagu jiray iskuulka, Young Infantino wuxuu u heellanaa daraasaddan wuxuuna hayaa fursado furan oo ku saabsan doorashada xirfadeed.
Waxaa ka mid ah fursado badan oo dugsiyadu bixiyaan ka qaybgalka cayaaraha dhalinyarada taas oo Infantino kaash noqotay iyadoo la cayaaro ciyaar kubada cagta ah. Marna ma nuujin wax fikrad ah oo ku saabsan inuu u socdo akadeemiga kubadda cagta. Qoyska Infantino waxay aaminsan yihiin inay qiimo badan ku leeyihiin waxbarashada, ka duwan kubadda cagta.
Gianni Infantino Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Xaqiiq ah -Wadada Cagta
Inkastoo Infantino ay jeceshahay kubadda cagta ayna soo saartay xiisaha kubada cagta. Si kastaba ha ahaatee, ma uusan haysan hibo cajiib ah, horumar ah taasoo keentay in uu raadsado siyaabo uu uga qeyb galo ciyaaraha isagoo aan aheyn ciyaaryahan xirfadle ah. Waxay ahayd qorshe si fiican loo fuliyay.
Sida habka Infantino uu u ogaaday qorshihiisa uu ku galo maamulka kubada cagta waxaa lagu sharaxay 'qiimo la'aan'. Halkii uu ku sii jiri lahaa akadeemiyadda oo uusan laheyn wax tayo ah, Infantino ayaa go'aansaday in ay bartaan laan ka mid ah sharciga taas oo la xidhiidha Xukunka kubada cagta. Waxa uu ku qoran yahay Jaamacadda Friborg Halka uu ku qaatay shahaadada sharcigiisa kaddib sannado waxbarasho.
Gianni Infantino Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Xaqiiq ah -Sida uu noqday madaxweynaha FIFA
Ka dib markii uu ka qalin jebiyey Jaamacadda, Infantino wakhti wakhti uma dhicin in la aqoonsado dareenka dhalinyarada. Iyada oo uu u qalmayo sharciga, wuxuu u adeegay Lataliyaha Sharciga ee Ururada Kubadda Cagta ee Yurub.
Fame ayaa albaabka garaacay markii uu ku biiray qalabka UEFA ee 2000. Xoghayaha Guud wuxuu ahaa xoghayaha Oktoobar 2009 ka dib markii loo magacaabay ku-xigeen laba sano. Hore u sii socoshada 2015, Infantino ayaa heshay taageerada Guddiga Fulinta UEFA si ay u matalaan ninkii hore, Sepp Blatter at 2016 Congress of Extraordinary FIFA. Inuu fadhiisto macallinkiisa ayaa tilmaamaya dhibicda isbedelka. Infantino ayaa fursad u helay inuu ku dhawaaqo musharaxa madaxweynenimada kaas oo uu mucjisooyin ku guuleystay. Bal eeg, on 26th ee Febraayo 2016, Infantino wuxuu noqday Talyaaniga ugu horeeyay ee qabta Madaxda FIFA.
Gianni Infantino Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Xaqiiq ah -Nolosha Xiriirka
Inkasta oo ay jirto wax diiwaan gashan oo ku saabsan nolosha xiriirka hore ee Infantino. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira xabbado ay ka mid yihiin sida Swiss-Talyaaniga ay u heleen jacaylkiisa noloshiisa, haweeney Lubnaan, Leena Al Ashqar. Infantino ayaa la kulantay lana jecel yahay Leena (2018 sawir hoose) horaantii 2000 inta ay hawsheeda rasmiga ah ka qaadatay xiriirka kubada cagta Lubnaan.
Labadaba jacaylka ayaa si fiican ugu xidhnaa kulankoodii ugu horeeyay sababtoo ah ganacsiga la midka ah ee ay wadaagaan kubadda cagta. Labada lamaane waxaa lagu baraa afar gabdhood (sawir hoose oo leh hooyadooda) kuwaas oo ah; Alessia, Sabrina, Serena iyo Dhali.
Dhammaan afarta gabdhood waxay qayb muhiim ah ka yihiin qoyska Gianni Infantino.
Gianni Infantino Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Xaqiiq ah -Saaxiibayaal la Pope
Saaxiibtinimadooda xuduudo kuma leh. Gianni Infantino ayaa mar qudha u soo bandhigay Pope-ka, oo ah maaliyad loo habeeyay oo leh lambarka 9 inta lagu guda jiro kulan ka dhacay Xarunta Vatican (Catholic Herald Report). Saaxiibtinimada uu la leeyahay Pope Frances wuxuu soo jeedin karaa diinta Gianni Infantino, oo laga yaabo inuu ka soo jeedo Qoyska Reer Roman Katooliga.
Gianni Infantino Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Xaqiiq ah -Muuqaalkiisa
DailyMail markii hore lagu tilmaamay Gianni Infantino sida "Hood" ee maqaalkooda cinwaankoodu yahay "Waa maxay sababta UEFA ujeeda Thunderbirds ee Gianni Infantino isku deyeyso inuu kubadda ku dilo?"
Si kastaba ha noqotee, ka dib markaad si fiican u fiirsato, akhristayaal badan ayaa isku raacay in Infantino ay u egtahay mid la mid ah Hood The - Sawirka kor ku xusan. Hood The waa shaydaanka ugu weyn iyo cadawga dadka caanka ah Thunderbirds Taxanaha TV-ga.
Gianni Infantino Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Xaqiiq ah -Bixinta Adduunka
Iyadoo la tixgelinayo nolosha Gianni Infantino, hal murugo weyni waa xaqiiqda ah inuu marnaba tagin akadeemiyadda kubada cagta. Marka la gaaro doorka Madaxtinimada ee FIFA, Infantino ayaa go'aansatay inay cadaadiso aduunka adigoo muujinaya xirfadihiisa kubada cagta.
Go'aanka Infantino ee ah inuu kubadda cagta ku bilaabo kubada cagta asxaabteyda kubada cagta ayaa naqdiyay khibradiisa 0-da. Taageerayaashaas oo kale ayaa la xaqiijiyay markii ay arkeen sawiro iyo fiidiyoow farsamoyaqaanada kubada cagta ee Infantino.
Gianni Infantino Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Xaqiiq ah -Saaxiibtinimo Micheal Platini
Xidhiidhka ka dhexeeya Gianni Infantino iyo Micheal Platini ayaa jirey tan iyo markii uu hore ugu soo biiray qalabkii UEFA. Isagoo ka hadlayay kulankiisii ​​ugu horeeyay ee Fifa ee Mexico, Infantino waxay iftiimisay saaxiibtinimadooda;
"Waxaan soo raacay Michel sagaal sano oo uu ku sugnaa Uefa, todobo oo ah xoghayaha guud. Anigoo ah madaxweynaha UEFA, isaga iyo aniga waxaan sameynay waxyaabo waaweyn oo wada jira, waqtigan, waxaan rabaa inaan diirada saaro xusuusta wanaagsan. "
Inkastoo eedeymaha lagu soo oogay Platini, Infantino ayaa wali sii wata xiriir dhow oo lala yeesho macalinkii hore islamarkaana uu ka caawiyay hagidiisa. Wuxuu cadeeyaa ficilkiisa isagoo ku adkeynaya in;
"Waxaa laga joojiyay arrimo xiriir la leh kubadda cagta, laakiin looma joojin in uu la hadlo dadka."
Gianni Infantino Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Xaqiiq ah -Baahinta Luqado dhowr ah
Infantino wuxuu ku hadlaa wax ka yar lix luqadood oo caalami ah oo ay ku jiraan; Ingiriis Talyaaniga, Faransiiska, Bortuqiis, Isbaanish iyo Jarmal. Booliisku wuxuu kalsooni ku qabay inuu soo bandhigay aqoontiisa luqadeed markii uu soo bandhigay hadalkiisii ​​ugu horreeyay ee madaxweynaha FIFA ka dib guushii doorashada.
Hubinta FACT Waad ku mahadsantihiin akhrinta nooca "Infantino Childhood Story Story" oo lagu daray akhbaarta sawirada aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku haboonayn maqaalkani, fadlan dhiibo faallooyinkaaga ama nagala soo xiriir!